ယုဒသည်အဘယ်ကြောင့်ယေရှုကိုသစ္စာဖောက်သနည်း Online Online️အွန်လိုင်းရှာဖွေပါ▷➡️
ယုဒသည်ယေရှုကိုအဘယ်ကြောင့်သစ္စာဖောက်ခဲ့သနည်း။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာသိပါရစေ ယုဒရှကာရုတ်သည် ယေရှုကို အပ်နှံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာဒီဇာတ်ကောင်အကြောင်းပြောထားတဲ့စာပိုဒ်တွေတော်တော်နည်းတယ်၊ အဲဒီမှာပါတဲ့သူအချို့ကိုသူခိုးနဲ့သစ္စာဖောက်အဖြစ်ပြောကြတာကိုငါတို့သတိပြုရမယ်။ သော်ငြားလည်း, ယေရှုကသူ့ကိုတမန်တော်တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးထဲကတစ် ဦး အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ် သူတို့သည်အနာဂတ်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်သင်ကြားမှုကိုပိုရလိမ့်မည်။
သို့သော်ရှိပါသည် သီအိုရီအမျိုးမျိုး ဘာကယုဒကိုအလင်းနည်းနည်းပေးပြီးငါတို့ကိုနားလည်ပေးနိုင်သလဲ သူကဘာလို့သူ့ဆရာကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တာလဲမရ။ သို့သော်ထိုမတိုင်မီကယုဒသည်မည်သူနှင့်သူလုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည်။
1 Judas Iscariot ကဘယ်သူလဲ
3 ယုဒကယေရှုကိုဘာကြောင့်သစ္စာဖောက်ခဲ့တာလဲ၊ သီအိုရီအမျိုးမျိုး
3.1 ၁။ ယုဒ၏စိတ်ပျက်ခြင်း
3.2 ၂။ ယုဒ၏ပင်ကိုယ်စရိုက်
3.3 ၃။ ယုဒသည်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ခြင်း၊ မြင့်မြတ်သောအစီအစဉ်
Judas Iscariot ကဘယ်သူလဲ
ယုဒအကြောင်းငါတို့သိတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုငါတို့သိတယ် သူသည် Simon အမည်ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး ၏သားဖြစ်သည် နှင့် အဖွဲ့ရဲ့ငွေတွေကိုငါတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်အလေ့အကျင့်တစ်ခုရှိခဲ့တယ် စုဆောင်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခိုးယူသည်။
မေရှိယ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်လာစဉ်တွင်သူ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုမှာယုဒသည်ယေရှုအားဖမ်းရန်သံလွင်တောင်သို့အာဏာပိုင်များကို ဦး ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်လူအုပ်ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးဘဲယေရှုအားဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ရန်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သူတို့သည်ယုဒဒင်္ဂါး ၃၀ ကိုပေးခဲ့သည် ရောမစစ်သားများအား "ဒုက္ခပေးသူ" အားဖော်ထုတ်ရန်ငွေ၏။
ရသောအခါ ယုဒရှ သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်တယ် သူအလွန်နောင်တရခဲ့သည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကသူ့အားပေးသောငွေကိုပြန်ပေးရန်ရှာဖွေသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရမ်းနောက်ကျနေပြီမရ။ ယုဒ သူ၏သစ္စာဖောက်မှုကိုပြီးမြောက်စေခဲ့သည်မရ။ သိပ်မကြာပါဘူး သူကိုယ်တိုင်သူ့အသက်ကိုသတ်ခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည်ပုံပြင်များစွာပါ ၀ င်သောစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်စာသားနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအချို့ကအချိန်နှင့်အညီစာပေဘာသာစကားကိုသုံးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ကဏ္ many များစွာ၌ကွဲလွဲမှုများရှိသည်။ ရှေ့ဆက်မသွားဘဲသူတို့ရှိနေတယ် ယုဒသည်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ခြင်းအကြောင်းရှင်းပြရန်သီအိုရီအမျိုးမျိုးမရ။ သို့သော်မည်သည့်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပါစေ၎င်းတို့အားလုံးသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သည်။
အင်အားအများဆုံးရရှိသောသီအိုရီတစ်ခုမှာ Simon ၏သားဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုအခြေခံသည် သူသည်ယေရှု၌စိတ်ပျက်ခဲ့သည်မရ။ ယုဒသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် မေရှိယကြေငြာသောဘုရင်ကိုစောင့်ပါ, နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာဘယ်သူ ဦး ဆောင်မလဲ ဒေသခံအာဏာပိုင်များအားအကြမ်းဖက်သောလုပ်ဆောင်မှုမှတဆင့်လွတ်မြောက်ရေး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကားသည်အလွန်လူကြိုက်မများပေ။
အခြားသီအိုရီများသည်ယုဒ၏ကိုယ်ပိုင်စရိုက်ကိုအခြေခံသည်။ ငါတို့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ သူသည်လူလိမ်၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူခိုး၊ သစ္စာဖောက်ဖြစ်သည်မရ။ ထို့ကြောင့် nဒါမှမဟုတ် သူ့သခင်ကို ပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့ ရောင်းလိုက်ရင် ထူးဆန်းနေမှာလား။မရ။ သူသည်သူ၏အစီအစဉ်များကိုယေရှုသိသည်ကိုသိသောအခါမှသာယေရှုသည်အခြားအရာအားလုံးထက်သူ့ကိုပိုချစ်ကြောင်းနားလည်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာသူ့သိစိတ်ကသူ့ကိုသတ်သေဖို့ ဦး ဆောင်ခဲ့တယ်။
3. ယုဒကယေရှုကိုဘာကြောင့်သစ္စာဖောက်ခဲ့တာလဲ။ ဘုရားသခင့အစီအစဉ်
ကျမ်းမြတ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများနှင့်မသက်ဆိုင်သောသီအိုရီတစ်ခုရှိပါသည်။ သို့သော် the ဟုခေါ်သော synoptic ဧဝံဂေလိတရားသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်များစွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည် ယုဒခရစ်ဝင်ကျမ်း
ဤသီအိုရီသစ်ကဤသို့ဆိုသည် ယုဒသည်သူ၏ခေါင်းဆောင်များ၏အမိန့်ကိုလိုက်နာသောသစ္စာဖောက်စစ်သည်တစ် ဦး နှင့်တူပြီးသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကွောငျ့, သူသည်သစ္စာဖောက်မဟုတ်ပါ၊ အာဇာနည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် သူသည်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်များကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်။
ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုဒကယေရှုကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအဲဒါကိုသိဖို့ပါပဲ ဤသစ္စာဖောက်မှုကိုယေရှုသိသည်မရ။ ဒါကငါတို့ကိုပြတယ် ယေရှုသည်ကြိုတင်စီမံထားသောအစီအစဉ်နှင့်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ဖြင့်ဤလောကသို့ကြွလာခဲ့သည် infinito.
အခြားမည်သူမဆိုသစ္စာဖောက်တစ် ဦး အားသူနှင့်အတူမနေစေဘဲသူ၏သစ္စာဖောက်မှုအားအသုံးမပြုမီသူ့ကိုရှုံ့ချဖွယ်ရှိသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယုဒအပေါ်ယေရှု၏မေတ္တာသည်အလွန်ကြီးသဖြင့်သူ၏ကြမ္မာကိုပြည့်စုံစေခြင်းကိုဘယ်သောအခါမျှမတားဆီးခဲ့ပေ။
ဒါ ဖြစ်ပြီ! ဒီဆောင်းပါးကသင့်အကြောင်းပြချက်ကိုနားလည်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုဒကယေရှုကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်မရ။ အခုမင်းသိချင်ရင် သဖန်းပင်ကိုယေရှုဘာကြောင့်ကျိန်ဆဲခဲ့တာလဲ, ဆက်လက် browsing Discover.online ။